Isitudiyo esinoxolo kwimithi yama-apile/ Pesa õunapuu otsas
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguPiret
Khwela izinyuko ngasemithi ye-apile ukonwabele esi studio salungiswayo sivulekileyo kunye nebalcony yayo ejonge igadi eneentyatyambo kwimizuzu eli-10 uhamba ukusuka embindini. Umgangatho woku-1 ngowakho ngokupheleleyo ngokungena ngasese ngaphandle ngelixa umniniyo ehlala kumgangatho ophantsi.
Ungayipaka imoto yakho kwindlela yepropathi. Kule nto kufuneka uvule kwaye uvale isango (yonke i-manual).
I-Kuressaare yidolophu encinci onokuthi uhambe ngayo okanye uhambe ngebhayisekile yonke indawo, kodwa indawo ilungile ukuqala ukufumanisa yonke iSaaremaa - izitrato eziphambili ezikukhuphayo zikufutshane.
Kukho indawo yokurenta ibhayisekile kufutshane nekona, iPikk street 54.
Ngokufanelekileyo phakathi kweziko kunye nesakhiwo esibalaseleyo sexesha laseSoviet le-Saare KEK (iOfisi yoKwakha yaseSaare Kolkhoz) ngoku ehlala imyuziyam encinci kubomi bemihla ngemihla beSoviet kunye nendawo yemisitho emangalisayo enomqolo weekonsathi ezigqwesileyo kwi-ajenda. Kunye ne-Estonian Jazz Union, umnyhadala womculo we-jazz.ee kunye nezinye iikonsathi ezibukhoma ziququzelelwe apha.
Kwaye kufutshane nawe ungaphuma edolophini, ungene kwindawo yogcino lwendalo yasePõduste meadow ukusuka kwimbali yeBhulorho enkulu (indlela yaseKihelkonna). Ukuhamba ngasecaleni lasekunene lomlambo, ufika kwinqaba yokubukela iintaka ukusuka apho unokuyonwabela umbono omkhulu webala legalufa laseKuressaare.
Iivenkile ezimbini zegrosari kumgama omfutshane wokuhamba.
I-Kuressaare Sports Centre ikwisitrato esifanayo, i-Vallimaa 16a, eneenketho ezininzi, ukusuka kwimpilo ukuya kwiinkundla ze-basketball kunye nokunye. Kukho nesauna.
Umbuki zindwendwe ngu- Piret